Sonos Roam, famakafakana miaraka amin'ny vidiny sy ny fiasa | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 06/04/2021 15:00 | General, hevitra
Mihabetsaka ny safidy hafa azo henoina, indrindra rehefa miresaka momba ny fivezivezena isika, ary tsy maninona mihitsy ny midina amin'ny pisinina na mandeha manao barbecue miaraka amin'ny mpandahateny mahay ary manararaotra izany mba hamelomana ny tolakandrontsika toy ny azo atao. Nanamarika ny fahombiazan'ny hetsika i Sonos ary te hanao azy ho kely kokoa sy manintona kokoa.
Jereo miaraka aminay ireo fiasa rehetra ananany ary maninona i Sonos izao no milaza ny seza fiandrianan'ireo mpandahateny azo entina.
Toy ny tamin'ny fotoana maro hafa, nanapa-kevitra ny hiaraka amin'ity famerenana ity izahay amin'ny alàlan'ny horonan-tsary amin'ny fantsona YouTube izay hahafahanao mahita ny unboxing feno, fanomanana dingana ary fiasa mahafinaritra hafa toy ny fitsapana amin'ny feo. Manoro hevitra anao izahay handalo amin'ny fantsonay ary hanararaotra hiditra amin'ny fiarahamonina aktualidad Gadget, amin'izay vao afaka manohy mitondra ny atiny tsara indrindra sy manampy anao amin'ny fanapahan-kevitrao izahay. Aza adino fa ny boaty fanamarihana dia afaka mitazona ny fanontanianao rehetra, aza misalasala mampiasa azy. Tianao ve? Azonao atao ny mividy ny Sonos Roam amin'ny ITY FIAINANA ity.
1 Fitaovana sy famolavolana: Namboarina tamin'ny Sonos
3 Automate TruePlay sy Sonos Swap
4 Fahaleovan-tena sy kalitaon'ny feo
Fitaovana sy famolavolana: Namboarina tamin'ny Sonos
Ny orinasan'i Amerika Avaratra dia afaka manangana fitaovana manana ny mombamomba azy, ary efa an-taonany maro no nanao izany. Amin'ity tranga ity dia tsy azo ihodivirana ny Sonos Roam mampatsiahy antsika ny vokatra marika iray hafa, ny Sonos Arc. izay nohadihadianay vao haingana. Ary ny fanaovana ny marina dia toy ny kopia kely an'ity famolavolana ity izay manintona tokoa ary maro ny fiderana no nahomby tamin'ny orinasa. Izy io dia manana habe somary voafintina sy ireo akoran'ny marika manokana, miaraka amin'ny vatana tsy manam-paharoa manala tanteraka ny nylon hanome fanoherana lehibe kokoa. Nisafidy loko roa izahay, fotsy sy mainty miaraka amin'ny famaranana matte.
lanja: Gramin'ny 460
Mazava ho azy fa tsy fitaovana maivana izy io, fa tsy misy mpandahateny mendrika ny lanjan'izy io fa hanana lanja maivana, amin'ity vokatra azo avy amin'ny feo ity dia mazàna ny kalitaon'ny feo dia mazàna no tsy dia tsara loatra. Tsy mitranga amin'ny Sonos Roam, izay misy koa ny fanamarinana IP67, tsy tantera-drano izy io, Manohitra ny vovoka ary azo asitrika anaty rano hatrany amin'ny iray metatra hatramin'ny 30 minitra arakaraka ny marika. Tsy mbola nanamarina ireo teny ireo izahay noho ny antony mazava, fa farafaharatsiny ny Sonos Move dia nanamarina izany tamintsika.
Toy ny mitranga amin'ny tranga hafa, Sonos dia mandefa vokatra izay namboarina tsara hampiasan'ny Wifi, noho izany dia misy karatra tambajotra mifanaraka amin'ny router rehetra 802.11 b / g / n / ac 2,4 na 5 GHz miaraka amin'ny fahaizana milalao tsy misy tariby. Mahaliana ny mifanentana amin'ireo tamba-jotra 5 GHz, fantatray fa tsy mpandahateny maro no mifanentana, ao amin'ity Sonos Roam ity dia tsy ampy izany. Na izany aza, tsy tokony hohadinointsika fa Sonos dia solosaina kely miendrika mpandahateny, miafina ao am-pony izy io a 1,4 GHz quad-core CPU misy maritrano A-53 izay mampiasa fahatsiarovana 1GB SDRAM sy 4GB NV.
Google Home mifanentana
Amazon Alexa mifanentana
Fifanarahana Apple HomeKit
Izany rehetra izany dia mahatonga ny Sonos mandehandeha fitaovana mahaleo tena iray izay nifandimby Bluetooth 5.0 ho an'ireo fotoana izay mitondra anay lavitra ny trano, ary inona no noforonina ity Sonos Roam ity. Ankoatra izany dia hanana ihany koa isika Apple AirPlay 2 izay mahatonga azy hifanaraka tanteraka amin'ireo fitaovan'ny orinasa Cupertino sy miaraka aminy Apple HomeKit raha ny amin'ny famoronana hetsika multiroom amin'ny fomba mora indrindra. Izany rehetra izany dia mamela antsika hankafy Spotify Connect, Apple Music, Deezer, ary maro hafa.
Automate TruePlay sy Sonos Swap
Ny sanda fanampiny an'ny Sonos Roam dia tsy ilay voalaza etsy ambony ihany, na dia toa mifanipaka aza satria izy no Sonos mora indrindra eny an-tsena, mahita rindrambaiko sy fampitaovana roa izahay izay tsy nampidirin'i Sonos tao anatin'ny sisa mpandaha-teny nataony. . Manomboka amin'ny Sonos Swap izahay: Rehefa mifandray amin'ny Wi-Fi ianao ary ny bokotra play / fiatoana amin'ny Roam dia notsindriana sy nitazona, ilay mpandahateny dia hanisy sonia mpandahateny Sonos hafa ao amin'ny tambajotrao hamoahana feo matetika matetika. Ny mozika dia hafindra avy amin'ny Sonos Roam mankany amin'ny mpandahateny akaiky indrindra ao anatin'ny segondra.
Miresaka momba ny TruePlay mandeha ho azy isika izaoMaro aminareo no mahalala fa ny TruePlay no rafitra fandalinana ny tontolo iainana Sonos izay mamela antsika hahazo feo tsara indrindra isaky ny fotoana. Ankehitriny isika dia afaka mampihetsika fiasa mandeha ho azy izay manome antoka antsika fa ny Sonos TruePlay dia miasa tsy tapaka hanolotra antsika ny audio tsara indrindra na dia mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth aza isika, zavatra manokana amin'ny fotoana Sonos Roam.
Mandeha amin'ny amponga izahay izao, raha tsy misy famaritana ao mAh dia manana port USB-C 15W (adaptatera tsy tafiditra) ary fanohanana famandrihana tsy misy tariby Qi, ny charger izay tsy maintsy vidintsika misaraka amin'ny 49 euro. Manome toky antsika i Sonos fa hisy ny famerenana 10 ora, izay tamin'ny fitsapana anay dia tratra sahabo raha toa ka tapaka ny feo sy ny mpanampy ny feo ary mihoatra ny 70% ny volantsika. Raha te-handoa izany dia handany adiny iray mahery amin'ny alàlan'ny port USB-C izahay, tsy afaka nanandrana ny charger Qi.
Mikasika ny kalitaon'ny feo, Raha ampitahaintsika amin'ny ambiny amin'ireo vokatra ao aminy, toa ny Ultimate Ears Boom 3 na mpandahateny JBL, dia mahita vokatra maivana mazava kokoa isika. Eny OK manana tabataba ambonin'ny 85% izahay, Toa tsy azo ihodivirana izy io noho ny haben'ny vokatra, amin'ny fomba mitovy avo dia avo dia avo tokoa, asongadiny manokana ny ambany. Gaga aho tamin'ny herin'ny fitaovana goavambe, ny halehiben'ny mikrônônaly ao aminy. Izany rehetra izany no mahatonga azy ho mpandahateny mpitety portable matanjaka sy avo lenta indrindra amin'ny tsena 179 €., ary mahagaga fa tsy miaro ny vidiny tafahoatra raha oharina amin'ny fifaninanana.
Navoaka tamin'ny: 6 Aprily 2021
Fanovana farany: 3 Aprily 2021
Tsy re ny fifandraisana eo amin'ny mpandahateny mpandahateny
Sonos kalitaon'ny feo sy hery
Spotify Connect sy ny sisa amin'ireo soa azo avy amin'ny Sonos S2
Alexa, Google Home ary AirPlay 2 mifanentana
Mavesatra ny lanjany
Tsy mampiditra charger Qi
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sonos Roam, kely nefa masiaka [REVIEW]